Ndị na-emepụta ihe osise na ndị na-ebubata ya - Projectlọ ọrụ mmepụta ihe osise nke China
Okwu Mmeghe Na-ewusi nduzi na njikwa nke ngalaba tozuru etozu nke ime obodo na ime obodo maka iji ala nke ala na ọtụtụ ihe owuwu dị iche iche na-akwado ịkwalite iji ala na ihe owuwu dị iche iche iji kwekọọ na ebumnuche mmepe na ihe ndị bụ isi achọrọ atumatu a, si otua nye nkwa maka imezu atumatu ime obodo na nke ime obodo, nhazi ezi uche, nchekwaba ala, mmepe kesasiri ike. Plannin ...
Okwu Mmalite gụnyere mmiri mmiri (mmiri mmiri na-ewu ụlọ na ịbịaru mmiri) na ọkụ eletrik (ịbịaru ụlọ eletriki eletriki), na-akpọkarị mmiri na ọkụ eletrik. Iwulite mmiri na ịse ihe eji arụ ọrụ mmiri bụ otu n’ime ihe mejupụtara otu ọrụ na injinịa. Ọ bụ ihe ndabere maka ịchọpụta ego a ga-akwụ na ịhazi ihe owuwu ahụ, ọ dịkwa oke mkpa ...
Okwu Mmalite Ihe ndị bụ isi nke mejupụtara grid bụ triangular cone, triangular prism, cube, tadcated quadrangle, wdg. Ọ nwere uru nke ohere nchegbu, ìhè arọ, nnukwu rigidity, ọma seismic arụmọrụ, wdg Ọ ga-eji dị ka ụlọ nke mgbatị ahụ, sinima, ngosi ulo, na-eche ụlọ nzukọ, ámá egwuregwu guzoro okwuchi windo, hangar, abụọ-ụzọ nnukwu kọlụm okporo Ọdịdị na ...
Okwu mmeghe Membrane structure bu nchikota atumatu na nhazi. Ọ bụ ụdị ihe owuwu dị warara nke na-eji ihe ike akpụkpọ ahụ dị elu na ihe enyemaka inye aka iji mepụta nrụgide ụfọdụ dị n'ime ha n'ụzọ ụfọdụ ma mepụta ọdịdị ọnọdụ ọnọdụ ụfọdụ n'okpuru njikwa nrụgide, nke a na-eji dị ka ihe mkpuchi ma ọ bụ ụlọ isi ahụ na nwere nguzo zuru ezu iguzogide ibu mpụga. Akpụkpọ ahụ Ọdịdị etịbede mode nke dị ọcha ogologo-akara architectu ...
Okwu Mmalite Steel Ọdịdị etiti bụ a Ọdịdị tumadi mere nke ígwè na bụ otu n'ime ndị isi ụdị nke ụlọ owuwu. Ihe owuwu a nwere ikike dị elu, ịdị arọ dị nfe na akwa isiike, yabụ ọ dabara adaba maka iwu nnukwu ụlọ, nnukwu ụlọ na nnukwu ụlọ. Ihe a nwere ezigbo homogeneity na isotropy, bụ nke ezigbo ahụ na-agbanwe agbanwe, ma bụrụ nke kwekọrọ n'echiche bụ isi nke ndị ọrụ injinia izugbe. Ihe nwere ezigbo plasticity na ike, nwere ike ...
Okwu Mmalite ulo oru ulo oru na-ezo aka udi ulo nile eji eme ihe ma obu nkwado ihe, tinyere uloru ndi ozo, ulo enyemaka na ihe ndi ozo. A ga-etinye osisi niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njem, azụmahịa, ihe owuwu, nyocha sayensị, ụlọ akwụkwọ na ngalaba ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ogbako a na-eji maka mmepụta, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-agụnyekwa ụlọ mgbakwunye ya. Industrial osisi nwere ike kere n'ime otu-storey ulo oru wuru ...
Okwu Mmalite Villa: Ọ bụ ezigbo mgbatị nke obibi ezinụlọ yana otu okwu maka okomoko, njedebe dị elu, nzuzo na akụnụba. Ọ bụ ogige obibi a rụrụ na ala ịta ahịhịa ma ọ bụ ebe mara mma maka mgbake. Ọ bụ ebe a na-ekpori ndụ. A na-aghota na, na mgbakwunye na ọrụ bụ isi nke "ibi" dị ka ebe obibi, ebe obibi dị elu, ọ na-egosipụtakarị ndụ dị mma na njirimara nke obi ụtọ, na ebe obibi ogige nke onwe ya na meani nke oge a .. .
Ndị ọrụ mmadụ na nhazi ọkwa
Okwu Mmalite ike nke ụlọ ọrụ: companylọ ọrụ ahụ nwere ndị nrụpụta 7, ndị nrụpụta ihe owuwu 3, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ 2, yana onye na-ese mmiri na ọkụ eletrik 1, atọ n'ime ha rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ imepụta ihe karịrị afọ 3. Na ụlọ ọrụ ọkachamara kwekọrọ, obere ọrụ ọrụ nke ndị na-ese ihe bụ afọ ise, yana ndụ ọrụ kacha elu eruola afọ 13. Nhazi nke eserese ihe eji eme ihe gunyere: (ulo oru ulo oru, hotels, ulo ndi obia) na okpokolo ndi ozo ...